झापाको माओवादीमा महाभारत ! एमाले गएका पूर्व माओवादीलाई पदैपद « Sajilo Khabar
झापाको माओवादीमा महाभारत ! एमाले गएका पूर्व माओवादीलाई पदैपद
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १२, २०७८ बिहीबार
झापा, १२ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) झापामा नेतृत्वका लागि हानाथाप भइ रहँदा नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी नेता कार्यकर्ताले भने भट्टाभट जिम्मेवारी पाउन थालेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी झापामा चौथो पार्टी हो । जनमतका आधारमा पहिलो एमाले, दोस्रो नेपाली काँग्रेस र तेस्रो राप्रपा हो भने माओवादी चौथो पार्टी हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपनि आन्तरिक विवादले माओवादीले जिल्ला संयोजक, क्षेत्र, प्रदेश इकाई र पालिकमा निर्विवाद ढंगले नेतृत्व छनोट गर्न सकेको छैन । माओवादीको प्रदेश कमिटीले छनोट गरेको क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्र र स्थानीय तहका संयोजक, इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पनि विवादमा परेका छन् । प्रदेशले गरेका निर्णय विरुद्ध कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका छन् । माओवादी प्रदेश कमिटीले पालिकाका सदस्य, उपाध्यक्षमा निर्वाचितलाई सोही कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज दिएपछि विवाद बढेको हो । नेतृत्वबीच चरम अविश्वास र गुटबन्दीले झापाको माओवादी राप्रपा भन्दा कमजोर भएको हो ।
झापाको माओवादीभित्रको आन्तरिक किचलोको फाइदा उठाउँदै एमालेले माओवादीका जिल्ला स्तरका नेता कायकर्ताको ठूलो संख्यालाई पार्टी प्रवेश गराएको छ । पार्टी प्रवेश गरेका अधिकांश माओवादी पृष्ठभूमिका नेता कार्यकर्ताले एमालेले नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिएको छ । एमाले झापाका सिचव शिव ढुंगेलले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा गएका भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता माओवादीबाट एमालेमा आएको दाबी गरे ।
एमालेले पूर्व माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई झापामा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट रहेका बि एण्ड सी अस्पतालका संचालक दुर्गा प्रसाई एमाले प्रवेश गर्ने बित्तिकै केन्द्रीय सदस्य भए । माओवादीमा रहँदा प्रसाईलाई पार्टी सदस्यता जोगाउन पनि हम्मेहम्मे परेको थियो ।
पूर्व माओवादीका २५ जना नेता कार्यकर्ता झापाबाट एमालेको प्रदेश एक कमिटीको सदस्य छन् । यसैगरी एमाले झापा जिल्ला कमिटी झापामा २२ जन सदस्य रहेका छन् । एमाले झापाको मंगलबार सम्पन्न जिल्ला कमिटीको दोस्रो बैठकले अर्जुनधारा नगरपालिकामा दीपेन्द्र लम्साल र हल्दिबारी गाउँपालिकामा नरेश चुँडानलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी गौरादह नगरपालिका गंगाकुमारी कार्की, बाह्रदशी गाउँपालिका देवेन्द्र चम्लागाई र झापा गाउँपालिकाको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी हिमबहादु कार्कीले पाएका छन् ।
पूर्व माओवादीका प्रविण पोखरेलले निर्वाचन क्षेत्र २ को सहसंयोजक र मनोरथ तिवारीले प्रदेश ‘ख’ को सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन् । ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश ‘क’ संयोजकको जिम्मेवारी सत्यनाराण राजवंशी टाइगरले पाएका छन् भने सचिवको जिम्मेवारी पूर्व माओवादी कै भीम राईले पाएका छन् । यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश ‘ख’मा सचिवको जिम्मेबारी लक्ष्मी राजवंशीले पाएका छन् ।
पूर्व माओवादीले जनवर्गीय संगठन तथा विभागमा पनि जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनमा अफ्रोज खान, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनमा हडाम मुर्मू, रिटर्नी फेडरेशन नेपालमा नारायण काफ्ले र प्रगतिशील इन्जिनियरर्स एशोसिएसनमा रिङकुमार आचार्यले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसैगरी अखिल नेपाल किसान संघको सहइन्चार्जमा गोपाल चुँडाल र आदिवासी जनजाति महासंघमा डिएल (दयालाल) राजवंशीले सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागमा पर्शुराम राजवंशी, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयम् सेवा विभागमा तुलशी खतिवडा, विज्ञान तथा प्रविधि विभागमा भक्तिप्रसाद तिवारी, शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागमा कृष्ण विमली, कृषि तथा पशुपन्छी विभागमा शान्ता गौतम, श्रम तथा रोजगार विभागमा भूपाल ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागमा प्रमेश गिरीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सत्यनारायण राजवंशी, कृष्ण बिमली र अफ्रोज खान तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनु अघि नै एमाले प्रवेश गरेका थिए भने अन्य माओवादी नेता कार्यकर्ता पार्टी एकता भङ्ग भएपछि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । राजवंशी शिवसताक्षी नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पनि हुन् ।
एमाले अर्जनधारामा इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका दीपेन्द्र लम्साल, अर्जुनधारमा २०७४ सालमा माओवादीबाट मेयरका उम्मेद्वार भएका भूपेन्द्र न्यौपाने, खगेन्द्र नेपाललगायतका माओवादीका पुराना दर्जनौँ नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । लम्सालले माओवादीका लगभग चार हजार पार्टी सदस्य एमालेमा संगठित दाबी गरेका छन् । उनले एमालेमा काम गर्न थालेपछि मात्र पार्टीमा न्याय भए जस्तो लागेको बताए ।